निजी क्षेत्रबिनाको आर्थिक विकास असम्भव - Karobar National Economic Daily
निजी क्षेत्रबिनाको आर्थिक विकास असम्भव
query_builderJanuary 12, 2017 12:16 PM supervisor_account visibility1182
मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला गत वर्षको तुलनामा सहज अवस्थामा भए पनि अपेक्षाकृत सुधार भने हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको बताइरहेको छ भने सरकारले संसद्मा लामो समयदेखि ऐन कानुन धमाधम पारित गरी निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ ।
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा आर्थिक विकासको गति बेरोकटोक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने एकाथरी विचार र संक्रमणकालको अन्त्यसम्म कुर्न सकिँदैन, त्यसैले आर्थिक विकासको गति अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अर्का थरी विचारका बीच आर्थिक क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरू अलमलिएका छन् ।
अवसर र सम्भावनाको खानी भनिने नेपाल यस्तै स्पष्ट दिशाबोध हुन नसक्दा आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका छन् । मुलुकको निजी क्षेत्र यो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्दै आर्थिक विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर विमर्श गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ, निजी क्षेत्रका केही अगुवाहरूको विचारः
उद्योगका समस्या हटाउन स्पष्ट नीतिको खाँचो
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग चाहिन्छ । तर विडम्बना, उद्योग सञ्चालन गरिरहेकाहरू टे«डिङ व्यवसायमा गएका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा टे«डिङतिर जानु बाध्यता पनि हो । उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्म समस्या नै समस्या छन् ।
उद्योगीका समस्या कसले हेर्ने, हाम्रा समस्याको सुनवाइ कहाँ हुन्छ, कुन मन्त्रालय फोकल प्वाइन्ट हो भन्ने स्पष्ट छैन । उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिको समस्या छ ।
कुन उद्योगलाई कुन मन्त्रालयले हेर्ने तथा कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिनियम नहँुदा साना उद्योगीले समेत कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । कुनै एउटा उद्योगलाई दुई–तीनवटा मन्त्रालयले मोनिटरिङ गर्दा व्यवसायीले विभिन्न किसिमका कठिनाइ झेल्नुपरेको छ ।
उद्योग दर्तामा पुँजी तोकिदिँदा साना लगानीकर्ताले ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठयारो परेको छ । सरकारसँग उद्योगहरूको यथार्थ विवरण पनि छैन । के कति उद्योग सञ्चालनमा छन्, दर्ता भएका छन्, अवैध रूपमा सञ्चालित उद्योगलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनसमेत सकेको छैन, जसले गर्दा सरकार कर उठाउन वञ्चित हुनुपरेको छ ।
उद्योग क्षेत्र र उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्याको समाधानका लागि गर्न सरकार तथा सरोकारवालाले त्यसको खोजी गर्नुपर्छ । उद्योग स्थापनामा देखा परेका वन तथा वातावरणसम्बन्धी समस्या निराकरणको पहल सरकारले गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक विकासमा देखा परेका अप्ठेरालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटोछरितो हल गर्नुपर्छ । इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका उद्योग कसैको वहकावमा बेलाबखत हुने नीति–नियम परिवर्तनका कारण बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ
मुलुक यतिबेला हामीले कहिल्यै अनुमान नगरेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । डेढ दशकपछि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा न्यून बिन्दुमा झरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.५६ प्रतिशतमा खुम्चेको छ, जसका कारण हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार जम्मा २२ खर्ब ४८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ ।
गत वर्ष हामीले सामना गर्नुपरेको भूकम्प, मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको असर आमजनजीवनमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमै देखियो ।
प्राकृतिक प्रकोप होस् वा राजनीतिक घटनाले सिर्जित समस्या नै किन नहुन्, यी राष्ट्रिय जीवनमा दोहोरिरहने नियति हुन् । त्यसैले यसलाई हामीले समस्याका रूपमा लिनेभन्दा पनि यस्ता घटनाबाट कति पाठ सिक्यौं भन्ने प्रश्न सधंै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि हामीले यी दुवै दुर्घटनाबाट पाठ सिक्न सकेका छैनौं । भूकम्पपछिको हाम्रो मुलुक पुनर्निर्माणका लागि हामीभन्दा दाताहरू बढी उत्साहित भए पनि हामीले आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका कारण पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सकेनौं ।
झन्डै २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भूकम्पपीडित नेपालीको घर, सरकारी भवन तथा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा देखिएको सुस्तताको कारण हामी नै हौं । पुनर्निर्माणका काम सरकारी संयन्त्रबाट मात्र सम्भव छैन भनेर नै हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परिकल्पना गरेका थियौं । तर, यसको सांगठनिक संरचना र नेतृत्वमा देखिएको कमजोरीले आज पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण एजेन्डा ओझेलमा परिरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात वार्षिक १ खर्ब नाघिसकेको अवस्थामा स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन बढाएर यसैका खपत गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी ल्याउने प्रयास पनि गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसका लागि राज्यले इलेक्ट्रिक भेइकल आयातमा लगाउँदै आएको महँगो कर छुटसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हरेक मुलुकको आर्थिक आय आर्जनको प्रमुख माध्यम भनेको वैदेशिक व्यापार र पर्यटन क्षेत्र नै हो । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बर्सेनि बढिरहेको छ र पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर पनि निकै नै सुस्त हुँदासमेत भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सक्नु र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि उल्लेख्य हुन सक्नुमा रेमिट्यान्स नै मुख्य कारण हो ।
हाम्रा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । यो वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी धान फलेको छ । रकमकै आधारमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको धान फल्नुमा मौसमको कति भूमिका रह्यो र राज्य वा किसानको कति भूमिका रह्यो भन्ने छुट्टै बहस होला, तर यसलाई हामीले सकारात्मक मान्नैपर्छ । पर्यटक आगमनले फेरि पुरानै लय समात्दैछ ।
निजी क्षेत्रबाट पर्यटन पूर्वाधारमा भइरहेका लगानीलाई हेर्ने हो भने हामीले अहिलेको पर्यटक संख्यालाई दोब्बर बनाउनैपर्छ । भारतले बिदा पर्यटनको सूचीमा नेपालको गन्तव्यलाई पनि राखिसकेको छ भने उत्तरी छिमेकी चीनका पर्यटकको बढ्दो गतिलाई पनि हामीले कायमै राख्न सक्नुपर्छ । यस्तै, पूर्वाधारजन्य उद्योगहरूमा पनि हाल बहार देखिनु अर्को सुखद संकेत हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई पूरा गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै भए पनि आर्थिक विकासका साझेदार भएकाले हामी निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग हातेमालो गर्न चाहन्छौं ।
मुलुकमा हाल उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल तथा चन्दा असुलीजस्ता समस्यामा केही कमी भएको महसुस भए पनि नयाँ संविधान जारीपश्चात् नीतिगत अन्योलतालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगी/व्यवसायीमा लगानीका लागि मनोबल बढाउने चुनौती रहेको छ । यही कारणले वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन भने आन्तरिक पुँजी परिचालनसमेत हुन नसकेको अवस्था छ ।
स्वदेशी उत्पादन खरिदमा सरकार नै उदासीन
कुशकुुमार जोशी, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ
सरकारले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । निर्देशिकामा सरकारी कार्यालयले नेपालमा उत्पादित गुणस्तरीय सामान १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्छ भनी उल्लेख छ । तर, त्यसको पालना सरकारबाटै हुन सकेको छैन ।
जबकि सरकारले नै नेपालमा उत्पादिन सामानको प्रयोग गर्दैन भने सर्वसाधारण तथा अरू देशले कसरी विश्वास गरून् ? व्यवसायीको काम के हो भने गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्नु तथा यथोचित मूल्यमा उपलब्ध गराउनु हो ।
उत्पादित सामानको मागका आधारमा नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण दिने भनिए पनि यथार्थमा त्यस्तोे छैन । सरकारले भाषण मात्र गरेर हुँदैन । सरकारले बनाएका नीति–नियम राम्रा भए पनि त्यसको पालना सरकारबाटै हुन सकेको छैन ।
समृद्घ नेपाल औद्योगीकरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपाल पनि सार्क राष्ट्रको केन्द्रमा भएको देश हो, जसले गर्दा स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने नेपालले निकै छिटो आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने देखिन्छ । नेपालमै उत्पादित सामानको खपतको वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ ।
विद्युत् आपूर्ति, बन्द–हड्ताल तथा बजारको समस्याले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । निर्यातजन्य वस्तुको अभिवृद्घि गर्न कुनै राहत, अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ ।
विभिन्न समयमा हुने राजनीतिक खिचातानी, सरकारको अस्थिरता तथा उदासीनताले हेटौंडा टेक्सटाइल, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, चुरोट कारखानालगायतका उद्योगहरू बन्द भए, जसले गर्दा यी क्षेत्रमा रोजगारी पाएका मजदुर पनि बेरोजगार हुँदै बिदेसिन बाध्य भए ।
सरकारले त्यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन गरी नेपालमै रोजगारीको वातावरण मिलाउन सकेको छैन । सरकारले अनेक बहाना बनाएर नेपाली उद्योग बन्द गराई विदेशबाट सामान आयात गरिरहेको छ । नेपाली सामान सरकारले नै किन खरिद गरिरहेको छैन ? गुणस्तरीय नभएर हो या महँगो भएर ? नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको खरिद किन नगरेको ? कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकार किन हिचकिचाइरहेको छ ? त्यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ ।
रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू खाडी मुलुक गएका छन् । ती श्रमिकलाई नेपालमै रोजगारी दिने क्षमता नेपाली उद्योगसँग छ । तर, त्यसको वातावरण मिलाउने जिम्मा सरकारको हो । खाडीमा श्रम गरेर २०/२५ हजार रुपैयाँ कमाउने मानिसले नेपालमा पनि त्यस्तै श्रम गर्ने हो भने कमाउन सक्छन् ।
उपत्यकाबाहिरका इँटा उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ
महेन्द्र चित्रकार, अध्यक्ष, नेपाल इँटा उद्योग संघ
गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगले यस्ता उद्योगमा विभिन्न किसिमका समस्या नित्याएका छन् । सरकारका विभिन्न निकायमा दर्ता भएका उद्योग तथा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित इँटा उद्योगबाट उत्पादित इँटाको मूल्यमै भिन्नता देखिन्छ । दर्ता भएका उद्योगले आयकर, भ्याट, सामाजिक सुरक्षा कर तिनुपर्छ ।
तर, बिनादर्ता सञ्चालित उद्योगले केही पनि तिर्नु पर्दैन । त्यसले गर्दा बजारमा गैरकानुनी रूपमा उत्पादित इँटाको मूल्य २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा दर्ता भएका उद्योगले न त घाटा खाएर दिन सकेका छन्, न त नाफा नै कमाउन सकेका छन् ।
घाटा खाए आफ्नो व्यापार नै डुब्ने डर, नाफा लिन खोजे नबिक्ने डर । जसले गर्दा नियमसंगत सञ्चालन भएका उद्योगले घाटाको व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
तराईका विभिन्न ठाउँमा ठूलाठूला इँटा उद्योग नै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित छन् । यस्ता उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम सरकारको हो । बिनादर्ता सञ्चालनमा आएका भुसे भट्टा पनि उत्तिकै छन् ।
लमजुङ, गोरखासहित तराईका विभिन्न जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालित इँटा उद्योगलाई पनि सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकार कर उठाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
नेपालभर ९ सय ५० उद्योग मात्र दर्ता छन् । नेपालमा अहिलेको हिसाबमा मागभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । पोहोरको तुलनामा इँटाको मूल्य पनि १० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा उत्पादित बुट्टेदार इँटा निर्यात गर्ने गरेको पाइन्छ, तर सामान्य इँटा निर्यात गर्ने स्थिति पनि छैन । किनकि यस्ता इँटा निर्यात गर्ने भनेको छिमेकी राष्ट्र भारत मात्र हो ।
भारतको लागतभन्दा नेपालको लागत बढी पर्छ, तर पनि भारतका बोर्डरहरूमा बेलाबेलामा अभाव भइरहने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालबाट निर्यात हुने गरेको छ । विदेशमा नेपालको धर्म–संकृति झल्कने खालका मठ–मन्दिर तथा भवन बनाउनुपर्दा नेपालमै बनाइएका बुट्टेदार इँटा निर्यात गर्ने प्रचलन पनि छ ।
इँटा उद्योगमा अहिले नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोगले २० देखि ३० प्रतिशत कोइलाको बचत हुने गरेको छ । इँटाभट्टामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेको इन्धनका लागि हो । तर, तराईका कतिपय जिल्लामा अवैध तरिकाले सञ्चालनमा आएका इँटाभट्टाका लागि प्रयोग हुने दाउरा सजिलै पाउनुका साथै वनजंगलबाट चोरीसमेत हुने गरेको छ । यस्ता उद्योगबाट उत्पादित इँटाको मूल्य र दर्ता भएर कानुनी दायरामा सञ्चालित उद्योगको मूल्य नै फरक हुने गरेको छ ।
आईसीटीलाई ज्ञानमा आधारित उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ
विनोद ढकाल, अध्यक्ष, क्यान महासंघ नेपाल
नेपालमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । योसँगै यो क्षेत्रमा सम्भावनाका आशा पनि बढेका छन् । आठ÷दस जनादेखि ५ सयभन्दा धेरै व्यक्ति एउटै कम्पनीमा रहेर काम गरेका छन् ।
एउटै सफ्टवेयरबाट लाखौं कमाउन सकिन्छ, तर पनि सूचना–प्रविधिलाई सरकारले उद्योगको मान्यता दिन सकेको छैन । ज्ञानमा आधारित उद्योगका रूपमा सूचना प्रविधिलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्छ ।
आईसीटी क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना छन् । पर्याप्त रोजगारी दिएका कम्पनीलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने र नयाँलाई उत्साहित गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । यसले गर्दा पनि यो क्षेत्र सधैं पछाडि परेको हो ।
नेपाललाई बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओ) को हब बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा जति पनि लगानी गरेको हुन्छ त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ । कम्पनी दर्ता र खारेजीको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ ।
राज्यले अलिकति मात्रै हौसला दिने कार्यक्रम ल्याउन सके नेपालमा पर्याप्त सम्भावना छन् । सूचना सञ्चार प्रविधि ठ्याक्कै कुन मन्त्रालयमातहतमा राख्ने भन्नेमा पनि अझै विवाद छ । राजपत्रमा सूचना सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा मौखिक रूपमा विज्ञान मन्त्रालयले हेर्ने भनिएको छ ।
आईटी हेर्ने मन्त्रालय एउटै हुनुपर्छ, हाम्रो माग हो । सूचना प्रविधि विभाग पनि आएको अवस्थामा आईसीटी मन्त्रालय छुट्टै भइदिए यो क्षेत्रका लागि राम्रो हो । तत्कालीन सूचना प्रविधि आयोग (एचएलसीआईटी) विघटन हुनुले यो क्षेत्रका लागि नकारात्मक असर परेको छ । आयोगको विकल्पमा सूचना प्रविधि विभाग मात्र भएर पुग्दैन, सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता छ ।
विश्वमा जति पनि आईटीसँग सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन्, तिनीहरूले अरू देशमा कार्यालय राख्दा प्राथमिकता के छ भन्ने खोज्छन् । विदेशी लगानी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । बंगलादेशमा धेरैजसो आईटी कम्पनी कार्यालय खोलेर बसेका छन् ।
त्यहाँ कति धेरै रोजगारी सिर्जना भएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदा नेपालमा धेरै फाइदा हुन्छ । नेपालमा आउन धेरै कम्पनी इन्छुक पनि छन् । लगानी भित्र्याउने र सफ्टवेयर निर्यात गर्ने सम्भावना छ ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाललाई ‘हव’ बनाउन फ्यासिलिएट पनि गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउँदा आईटीमा रोजगारदाता यति कम्पनी छन् भनेर सरकारले गर्वका साथ भन्न सक्छ ।
अर्थतन्त्र आर्थिक विकास निजी क्षेत्र